Agaasimaha CIA Mareykanka oo la kulmay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi | Awdalmedia.com
Agaasimihii hore ee CIA Mike Pompeo ayaa wada hadalo qarsoodi ah la yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi kaddib booqasho uu dalkaasi ku tagay horraantii sanadkan isaga oo kulan fool ka fool ah la qaatay Kim Jong Un.
Waxaa la sheegay in booqashadan tahay mid qeyb ka ah dadaallada socda ee waddada loogu sii xaaro kulan wayne lagu wado in uu dhexmaro hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyiiyo iyo madaxwayne Trump.
Warkan ayaa soo baxay mar la qabanayay wadahadalo ku saabsan Kuuriyada Waqooy oo dhexmaray Mr Trump iyo rai'sul wasaaraha Japan Shinzo Abe.
Trump ayaa sheegay in wadahadalo heerkoodu sareeyo oo toos ah ay la yeesheen Kuuriyada Waqooyi ka hor kulan waynaha la qorshaynayo in ay la yeeshaan, Kim Jong-un.
Waxaa kuu ka hadlayay xilligaasi gobolka Florida waxa uuna kulan la lahaa ra'sul wasaaraha Japan, Shinzo Abe.
Waxaa uu noqon doonaa kulankii ugu heerka sareeyay tan iyo sanaddii 2000, markaasi oo xoghayihii arrimaha dibadda Madeline Albright ay la kulantay Kim Jong Un aabihis, Kim Jong Il.